Mogadishu Journal » Qaybta 21aad
Maalintaas Diirshe waa iska ilaaliyey in uu yeesho wax shaqo ama ballamo kale ah waayo waxa uu ku talo jirey in uu maalintaas ku ogaado waxa ka dambeeyey sheekadii wiilkan yar loogaga baxsaday, oo gabadhan yari ilmaheeda ugu xoortay. Wiilka oo uu hadda aad u jeclaana si degdeg ah ayuu u korayey oo waxa Diirshse ogaa in uu mar aan dheerayn weydiin doono hooyadiis. Waxa uu saaxiibbadiis iyo Xamar-jadiid kasoo kaxaystay baabuur toobalcaaro ah oo u yaalley Boostada gadaasheeda. Inta boorsadii weyneyd ee Fanaxley sidatey gaariga sanduuqiisa dambe ku xiray ayay isaga iyo Fanaxley oo wiilkii yaraa ee Odowaa daaddihinayaa usii lugeeyeen dhinaca hoose. Diirshe wuxuu doonayey inuu Odowaa badda soo tuso. Waqti shawr saacadood ah ayay soo wareeegeen xeebta Liido iyagoo intaa la cayaarayey Odowaa si uu u oggolaado Fanaxley oo ugu aqbalo sidii qof uu yaqaan. Waqtigii qadada markii la gaareyna, inta gaarigii kusoo laabteen ayay waxay kasii qadeeyeen maqaayad markaas xiddiggeedu aad u nuurayey oo ku taalley waddada 30ka oo Calikamiin la oran jirey. Inkastoo sheekadoodu sidaas ka yara duwanaydna meel kasta oo ay tagaan waxaa loola shaqmayey sidii reer u dabbaaldegaya sannadguuradii wiilkooda. Intay qadaynayeen iyo maalintii oo dhanba Diirshe waxa uu ku jirey hawl ayay Fanaxley la socon oo uu iyada ku qiimaynayo. Waxa uuna ugu dambayn rumaystay in wax kastaa wixii dhacay haku kallifaane, aanay Fanaxley wiilka cidna kasoo qaadin ee ay iyadu dhashay, haddana ay aad uga shallaaysan tahay wixii dhacay oo ay isku dayeysey inay hesho kalsoonida Diirshe iyo wiilkiisa Odowaa. Isagoo aan iyada u sheegin ayuuna intay qadaynayeen qalbiga ka go’aansada inuu Afgooye geeyo oo soo baro eeddadiis iyo meesha ay hadda isaga iyo Odowaa ku nool yihiin. Markay Calikamiin kasoo baxeen oo gaarigii galeen uuna diyaar u yahay inuu Afgooye u ambabaxaan ayuu xasuustay inay ahayd inuu maanta wiilka soo tuso Saldhiggii Hodan. Dabadeedna wuxuu muddo dhinaca Koonfureed usoo raacay waddadii 30ka, oo bidix ula leexday jidka ka imanayey shaqaalaha ee casa popolare. Waxyar kaddibna Fanaxley waxay aragtay iyagoo gudaha usoo galay Saldhiggii Booliska ee Hodan. Fanaxley way argagaxdey oo dhinac ay wax u fasirato ayay garan weydey. Waxay u qaadatay in Diirshe u maaweelinayey maantoo dhan si uu booliska ugu dhiibo. Muddo gaaban oo maskaxdeedu aad u shaqaysay kaddibna waxay u badisay in la khayaanay oo la xirayo. Isla markii gaarigii istaageyba inta is-hayn weydey oo oydey ayay damacday inay dhinaca irridda weyn ee laga baxo u oroddo. Diirshe inta qaladka dhacay fahmey oo aad uga daba orday, gacantana soo qabtay ayuu isku deyey inuu u sharxo inay qalad fahamtey ee aanu khayaamayn, aanna cidna la xirayn. Markay ka rumaysan weydey oo ay aad u cabsootayna wuxuu jeebka kasoo saaray waraaqihii maxkamadda oo Saldhiggu u tiimbaraynayey mar kasta oo uu wiilka soo tuso. Nasiib wanaag cidina ma fahmin waxa
labadooda dhexmaraya oo qof kastaa dadkii saldhigga joogey ka mid ahi waxa uu ku mashquulsanaa danihii ay uu meesha u yimid. Markay Fanaxley waraaqihii aragtay xoogaana is-dejisey ayay iyagoo wiilkii yaraa wata horay usii galeen Saldhiggii Hodan. Markii loo soo tiimbareeyey waraaqihiina inta gaarigoodii soo galeen ayay kor iyo xagga Afgooye usii raaceen waddada weyn ee Makka-Al-Mukarrama. Intii ay safarka sii ahaayeen waxay ka sheekaysanayeen arrintii ka dhacday Saldhigga Hodan markii Fanaxney u qaadatay in la xirayo. Waxay kaloo Fanaxley soo fahmaysey sida illaa maalintii ay Diirshe kula kulantay Digfeer ay wax weyni iska beddeleen noloshii Diirshe. Wuxuu uga sheekeeyey in uu dhibaatooyin badan kasoo maray arrinta markii uu ku cusbaa laakiin hadda ay wax walbaa ugu fudud yihiin. Diirshe ma doonayn in eeddadiis arrinta runteeda ogaato sidaas darteedna markuu Afgooye soo gaarey toos uma aadin gurigii eeddadiis ee intaanu buundada weyn gaarin ayuu midigta ugu leexday dhinaca Beerta Tijaabada Cilmiga Beeraha oo dhinaca Balcad ka xigtey Afgooye. Markuu ilaa saddex kilomitir sii socdayna wuxuu bidix ugu leexday beer lagu nasto oo dadku lacag inta bixiyo maalin-joog u aadaan oo uu horay usoo ballansaday.
Waa socotaa . . . . . La soco jimcaha dambe.